Wada-hawlgalayaasha Google ee leh Raspberry Pi si ay u bilaabaan Kaaliyaha Virtual | Qalabka bilaashka ah
In badan oo naga mid ah ayaa durba guryaheena ku haysta qalab casri ah oo xukuma aaladaha intiisa kale ee guriga ku jira. Waxoogaa uunsi ah oo ka mid ah Amazon Echo ama Google Home laakiin la shaqsiyeeyay. Qaar kale waxay doortaan inay qalabka ka iibsadaan Amazon ama Google. Si kastaba ha noqotee hadda waxaa jira suurtagal kale, sharci, suurtagal ah oo suurtagal ah oo bilaash ah.
Google waxay ku biirtay Raspberry Pi abuurista mashaariic qalab bilaash ah. Marka, waxay abuureen caawiye guriyayn ah oo aan dhisi karno nafteena laakiin taasi waxay lahaan doontaa farsamada Google iyo Raspberry Pi.
Kaaliyaha Tani dalwaddii waxaa loogu magac daray VoiceKit ama ugu yaraan sidan waxaa loo yaqaan webka taas oo aan ka heli doonno dhammaan macluumaadka aaladda. Qalabkan si xiiso leh ayaa loo iibsan karaa iyada oo loo marayo cadadkii ugu dambeeyay ee 'MagPi'.
VoiceKit waa kaaliyaha ugu horeeya ee bilaashka ah ee bilaashka ah ee loo abuuray iskudhafka Google iyo Raspberry Pi
Joornaalkan waxaa abuuray Raspberry Pi Foundation waxaana cadadkii ugu dambeeyay xirmada dhismaha ee kaaliyaha dalwada ku lifaaqan, oo ay ku jiraan qaybo ay ka mid yihiin guddiga Pi Zero W, kuwa ku hadla, iwm etc Sidoo kale isticmaalaha waxaad awoodi doontaa inaad adeegsato softiweerka Google si aad uhesho kaaliye farsameed shaqeynaya iyo dhibaato la’aan.
Waqtigan xaadirka ah, iyada oo loo marayo majaladda waa habka kaliya ee lagu helo xirmadan kaaliyaha dalwaddii. Laakiin tani waa wax horeyba ugu dhacay guddiga Pi Zero bilo ka dibna waxaan bilownay inaan ka helno dukaamada Qalabka 'Libre Hardware'. Dhinaca kale Google ayaa taas xaqiijisay Qalabkan kaaliyaha dalwaddu ma noqon doono waxa kaliya ee aan bilaabayo anigoo kaashanaya Raspberry Pi. Xiisaha ay u qabaan guddiga ayaa ah mid dhab ah waxayna sii wadi doonaan inay soo bandhigaan mashaariic rasmi ah oo ay la socdaan barnaamijyada Google iyo qalabka loo yaqaan 'Raspberry Pi'.
Runtu waxay tahay in MagPi ay adagtahay in lala gaaro dukaamada Isbaanishka laakiin sidoo kale waa run in la helo Qalab Bilaash ah iyo Software Bilaash ah, Waxaan dhisi karnaa caawiyehan daljirka ah nafteena Dhibaato la'aan, haa, waa inaan noqonaa gacan yara gacan yara maxaa yeelay waa inaan marka hore dhisnaa xirmada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » Wada-hawlgalayaasha Google ee leh Raspberry Pi si loo bilaabo Kaaliyaha Virtual
Waa isku mid ilaa ay ka soo saaraan android shaqeynaya pi raspberry.
Jawaab Daniel Bum
Waxaan kugula talineynaa inaad kubiirto midho leh Libaaxa 2. Waxay sifiican uxariiraysaa waana natiijo layaableh oo kujirta daabacadaha 3D
Edgybees waxay ku horumarin doontaa xirfadahaaga tijaabada ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn 'ciyaar' fudud